को कति जिम्मेवार छ त्यसबारे इतिहासलै नै मूल्यांकन गर्नेछ : सिंह (अन्तर्वार्ता) - NepaliEkta
27 August 2020 Nepaliekta	0 Comments
1749 जनाले पढ्नु भयो ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन किन बारम्बार विभाजन भइरहेको छ ? यो प्रश्न आम रुपमा सोधिने प्रश्न हो र धेरैलाई चिन्तित बनाउने विषय पनि हो । करीब ७० वर्षको इतिहासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धेरै पटक विभाजित भएको छ । कैयौं विभाजनले पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई बचाएर अघि बढेको देखिन्छ भने कतिपय विभाजनले पार्टी र आन्दोलनलाई गम्भीर क्षति पुगेको देखिन्छ । आखिर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा किन पटक–पटक विभाजन हुने गर्दछ ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कहिले–कहिले र के कारणले विभाजन भएको थियो ? ती विभाजनबाट पार्टी र क्रान्तिलाई के कस्तो असर परेको छ अथवा विभाजन रोक्न वा एकतावद्ध हुन के कस्ता प्रयास भएका छन् ? भन्ने विषयमा हामीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका ज्यूँदो इतिहास नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं ।
यो अन्तर्वार्ता अलि लामो छ तर, रोचक छ । यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहाससँगै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको बारेमा पनि संक्षेपमा जानकारी दिनेछ । त्यसकारण अन्तर्वार्ता लामै भएपनि पाठकलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको फुट र विभाजन तथा तिनका कारणहरुबारे जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । (अन्तर्वार्ताः विद्यानाथ अधिकारी)
यो प्रश्नलाई हामीले दुई प्रकारले बुझ्नु पर्दछ । एउटा सैद्धान्तिक र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस सम्बन्धी अनुभवहरुबाट ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सम्पूर्ण संसारको स्वरुप द्वन्द्वात्मक प्रकारको हुन्छ । विश्वमा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरु भइरहेका हुन्छन् । समाजमा सबै चिजहरुमा द्वन्दहरु भइरहन्छ । परिवार, विभिन्न संघ–संस्था, धार्मिक संगठन वा राजनीतिक संगठनहरुमा पनि द्वन्द्व भएको पाइन्छ । जसले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद माथि विश्वास गर्छ उसले यो मान्दछ कि प्रकृतिमा हरेक कुरामा द्वन्द्व हुन्छ । यसकारण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि द्वन्द्व हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि द्वन्द्व हुन्छ ।
पार्टीमा अनुशासन सम्बन्धी कमजोरीहरु दोस्रो महाधिवेशन भन्दा अगाडिदेखि नै देखापरेका थिए । दोस्रो महाधिवेशन अगाडि पनि कतिपय अनुशासन सम्बन्धी कमजोरीहरु देखापरेका थिए । कैयौं साथीहरुलाई कारबाही गरिएको थियो तर त्यतिबेलाको सकरात्मक पक्ष के थियो भने कारबाहीमा परे पनि साथीहरुले पार्टी फुटाउने प्रयास गरेका थिएनन् । उनीहरुमाथि कारबाही भएपनि अनुशासनमा बस्थे । र, पार्टीमा सक्रिय भइरहन्थे । मतभेद भएमा अनुशासनमा बसेर पार्टीभित्र नै संघर्ष गर्दथे । त्यो बेला कतिपय पल्ट नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भयो । पीवीमा रहेका साथीहरु माथि पनि कारबाही भयो तर उनीहरुले पार्टीलाई फुटाउने काम गरेनन् ।
यहाँ एउटा सकारात्मक पक्ष के थियो भने तुल्सीलाल पहिला माझीको पक्षमा भएपनि राजाले ‘कू’ गरिसकेपछि उहाँ गणतन्त्रको पक्षमा आउनु भयो । १७ सालको काण्ड भन्दा पहिले पुष्पलाल, शम्भुराम र हामीहरु संविधानसभाको पक्षमा नै थियौँ र त्यस्का लागि पार्टीभित्र हामीले कडा संघर्ष गरेका थियौँ । तर ०१७ सालको काण्डपछि पुष्पलाल, शम्भुरामहरुले संविधान सभाको नारा छोड्नु भयोे ।
संविधान सभाको नारालाई अस्वीकार गरेपछि प्लेनममा पराजित भएका अन्य दुई वटा नाराहरुलाई पनि अगाडि नबढाउने र पार्टीहरु माथिको प्रतिबन्ध हटाउने तथा मौलिक अधिकार र राजबन्दीको रिहाई समेतको लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरियो । प्लेनममा रायमाझीका विरुद्ध कारबाही गर्ने प्रस्तावमा छलफल नगरेपनि केन्द्रीय समितिले उनलाई (रायमाझीलाई) महामन्त्री पदबाट हटाएर रायमाझी सहित तीन जनाको सचिवालय बनाउने निर्णय गर्यो । तर छिट्टै रायमाझी राजाको पक्षमा गएको कुरा प्रष्ट भयो । त्यसपछि दरभंगामा भएका हामीहरु म, तुल्सीलाल, शम्भुराम र भरतमोहन समेतले रायमाझी र उनको पक्षमा रहेको केन्द्रीय समितिको बहुमतका विरुद्ध विद्रोह गर्ने सल्लाह गर्‍यौं। त्यसपछि म पुष्पलालसँग सल्लाह गर्न काठमाडौँ आएँ ।
तेस्रो महाधिवेशन पछि पार्टीमा फुटको एउटा लामो श्रृंखला सुरु भयो । माझीलाई निकाल्ने सकारात्मक कार्य तेस्रो महाधिवेशनले पुरा गर्यो । यो एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक र राजनीतिक उपलब्धी थियो तर त्यसपछि पार्टीमा गम्भीर प्रकारको अनुशासन विहीनता देखापर्‍यो । पार्टी भित्रका सबै मतभेदहरुबारे खुला रुपले बनारसका गल्ली र चिया पसलहरुमा कुरा हुन थाल्यो । जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तको उल्लंघन हुन थाल्यो । महाधिवेशनले गरेका निर्णय, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले वा पीवीले गरेका निर्णयहरु जथाभाबी बाहिर जान थाले । त्यसको परिणाम के भयो भने, पार्टी कैयौं टुक्रामा बाँडियो । र पार्टीमा कैँयौँ समानन्तर समितिहरु बने ।
२०२७ सालमा म जेल बाहिर आइसकेपछि अब पार्टीलाई एकीकरण गरी एउटै केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह गरयौं र २०२८ साल मंसिर २० गते काठमाडौंमा एउटा भेला गरेर केन्द्रीय न्यूक्लसको गठन गर्यौं । त्यसको सेक्रेटरीमा मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने सचिवालयमा शम्भुराम र म थियौं । समितिका अन्य सदस्यहरुमा पछि थपिएकासमेत गरेर जय गोबिन्द शाह, निर्मल लामा, चित्रबहादुर केसी, भरतमोहन अधिकारी, कमल कोइराला, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, शिद्धिलाल सिंह, राम बहादुर, दिल बहादुर श्रेष्ठ, गंगाधर घिमिरे लगायत कैयौँ साथीहरु हुनुहुन्थ्यो ।
माथि पनि भनियो कि, विसं २०२६ सालमा हामी भद्रगोल जेलमा भएको भेलामा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय पूँजीवादी पार्टी नभएर सामन्त, दलाल र नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पार्टी भएको र, त्यसकारण, दुश्मन शक्ति भएको विश्लेषण गरेका थियौँ । पुष्पलालले कांग्रेसलाई जनतान्त्रिक र मित्रशक्तिका रुपमा व्याख्या गरिरहनुभयो । जेलबाट बाहिर आइसकेपछि पुष्पलालजीसँग हाम्रो त्यो विषयमा मतभेद भयो । तैपनि यो आधारभूत सैद्धान्तिक विषय होइन, महाधिवेशनमा गएर टुंगो लगाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । तर पुष्पलालजी त्यसको लागि तयार हुनुभएन ।
भक्तबहादुर श्रेष्ठ महामन्त्री भएको बेलामा नै काठमाडौं उपत्यकाका साथीहरुसित उहाँको तीब्र मतभेद बढेर गयो । त्यो अवस्थामा ६ जना साथीहरुले केन्द्रीय समितिमा राजीनामा दिनुभयो र त्यो राजीनामालाई सार्वजनिक पनि गर्नु भयो ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा त्यो बेलाको हाम्रो पार्टीको वैधानिक मोर्चा जनमोर्चा नेपाल सामेल भएको थियो । तर त्यसमा पार्टीलाई सामेल हुन नदिन उहाँले पुरा शक्ति लगाउनु भयो । ६२/६३ को आन्दोलनपछि उहाँहरुको जोड सरकारमा सामेल हुने तर्फ रह्यो । र जनमोर्चा नेपालबाट नै त्यसका पक्षमा निर्णय गराउनु भयो । खास गरेर हाम्रो पार्टी वा जनमोर्चामा पूर्व मसालका बराबर सदस्यहरु थिए । हाम्रो पूर्व पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीमा सामेल भएका रामसिंह श्रीसको नेतृत्वमा केही साथीहरुले सरकारमा जाने प्रस्तावको पक्षमा मत दिए । त्यसले गर्दा त्यो निर्णय गर्दा हामीहरु अल्पमतमा पर्यौँ तर त्यो निर्णय जनमोर्चा नेपालले नै गरेको थियो र पार्टीका तर्फबाट निर्णय भएको थिएन । यो कुरामा हाम्रो विरोध रह्यो कि पार्टीले निर्णय नगर्दै बैधानिक मोर्चाले त्यस प्रकारको निर्णय गर्नु सही थिएन । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमीमा हामीले एकता केन्द्रसँग सम्बन्ध तोड्यौ र २०६३ सालमा सातौं महाधिवेशन गरेर नेकपा (मसाल) को पुनस्थापना गर्यौँ । हाम्रो पार्टीलाई पुरै माओवादीमा लैजाने प्रकाशहरुको प्रयत्न त हुन सकेन, तर रामसिंहको नेतृत्वको एउटा समूहलाई हाम्रो पार्टीबाट फुटाएर लैजान उनीहरु सफल भए । हाम्रो समूहबाट फुटेर गएको त्यो समूह पछि कैयौँ टुक्रामा विभाजन भयो र उनीहरु मध्ये कतिपय साथीहरु पुनः नेकपा (मसाल) मा फर्केर आए ।
कारण सिधा र स्पष्ट छ ।
उहाँहरु हाम्रो पार्टीबाट अलग भएर माओवादीमा सामेल हुनका लागि विभिन्न ठाउँमा गुटबन्दी गर्न थाल्नुभएको भन्नेबारे हामीलाई एक दुई ठाउँबाट रिपोर्ट आयो । पछि त्यसबारे छलफल गर्नको लागि पार्टीको एउटा भेला भयो । त्यो भेलामा इण्डियाका धेरै साथीहरुले डिलारामहरुले भित्रभित्रै गुटबन्दी गरेको रिपोर्ट गर्नु भयो । त्यो भेलाले नै डिलाराम र गिरीधारीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्यो । त्यसपछि, जस्तो कि पहिले पनि हुँदै आएको थियो, उहाँहरुले हाम्रो पार्टीलाई दक्षिणपन्थी घोषणा गरेर एउटा बेग्लै समूह बनाउनु भयो र केही दिन पछि त्यो माओवादीमा मिल्न गयो ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एकता भन्दा धेरै विभाजन भएको देखिन्छ । पार्टी एकता गर्ने तपाईंहरुको पहल भएन कि, सम्भव नभएको हो ?
त्यो मुल्यांकन गर्ने कार्य सजिलो छैन । यो अत्यन्त कठिन र जटिल विषय हो । त्यो सित गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र व्यवहारिक समस्यहरु जोडिएका छन् । अहिलेसम्म पार्टीमा भएको फुटहरुले कैयौँ महत्वपूर्ण साथीहरुबाट हामी अलग हुनु परेको छ । ती सबै साथीहरु आज पार्टीमा सँगै भएको भए पार्टी आजको भन्दा कैयौँ गुणा बढी शक्तिशाली हुन्थ्यो । यो दुःखको कुरा हो कि ती साथीहरु जानुका साथै पार्टीको शक्तिलाई क्षीण बनाएको छ ।
त्यसले पार्टी र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई धेरै कमजोर बनाएको छ । त्यसका लागि व्यक्तिगत रुपमा म वा अन्य कुनै साथीहरु जिम्मेवार छन्, समाजको चरित्र जिम्मेवार छ, त्यो परिस्थितिजन्य बाध्यता हो या हाम्रो बस भन्दा बाहिरको कारणले त्यस्तो भएको हो । ती सबै कुराको विश्लेषण गर्नको लागि एउटा लामो लेख वा पुस्तकको नै आवश्यक पर्दछ । हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै त्यस प्रकारका फुटहरु धेरै भएका छन् । फुटसित सम्बन्धित सैद्धान्तिक वा राजनीतिक कारणहरुबारे धेरै लेख वा दस्तावेजहरु लेखिएका छन्, एक अर्का प्रति आरोप लगाएर धेरै सामाग्रीहरु प्रकाशित भएका छन् । तर फुटहरु किन भए, के तीनिहरुलाई रोक्न सकिन्थ्यो ? रोक्न नसकिएकोमा को जिम्मेवार छ ? त्यसबारे विश्लेषण गरेर कुनै लेख वा पुस्तक लेखेको मलाई थाहा छैन ।
-माक्र्सवादी दर्शनले, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनले यो कुरामा जोड दिन्छ कि प्रथम, कुनै कार्य वा घटना एउटा होइन सयकडौं कारणहरुको सम्मिलित परिणाम हुन्छ । द्वित्तीय, कुनैपनि एउटा घटना वा विषयलाई ठिकसित बुझ्न त्यसलाई एक्लै लिएर होइन, त्योसित जोडिएको समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर नै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर त्यसपछि पनि सत्य सधैँ अपूर्ण हुन्छ र सत्यलाई जान्नका लागि पुनः नयाँ नयाँ प्रकारले अध्ययन गरिरहनु पर्ने आवश्यक हुन्छ । सत्य अपूर्ण हुने मात्र होइन, नयाँ तथ्यको जानकारी, चेतनामा हुने परिवर्तन र विकास अनुसार सत्यको रुपमा पनि परिवर्तन भई रहन्छ । त्यसैले माक्र्सवादी दर्शनले सत्य निरपेक्ष हुँदैन र सापेक्ष हुन्छ भनेर मान्दछ । त्यै कुरा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएको फुटबारे पनि सत्य हो । अहिले यहाँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रकट गरिने विचारहरुलाई पनि त्यही सापेक्ष अर्थमा नै बुझ्नु पर्दछ र त्यसमा लगातार विवाद वा छलफल भैरहने कुरा निश्चित छ ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास अन्तरविरोध र फुटहरुले भरिएको छ । माक्र्स, एंगेल्स वा प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको सयममा नै एक दर्जन भन्दा बढी ग्रुपहरु थिए । द्वित्तीय विश्वयुद्धको समयमा विभिन्न सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुका विचमा फुट नभएको भए त्यो बेला नै विश्व समाजवादी क्रान्ति हुने सम्भावना थियो । त्यो फुटको कारणले विश्वको समाजवादी आन्दोलन एकातिर कम्युनिष्ट आन्दोनल र अर्काे तिर सामाजिक प्रजातन्त्रवादी आन्दोलका रुपमा विभाजित भयो । रुसको पार्टीमा बोल्सेविक र मेन्सेविकमा भएको फुट सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । त्यहाँ समाजवादी क्रान्ति पछि पनि कैयौं मतभेदहरु देखा पर्दै गए र कैयौँ शीर्षस्त नेताहरु, जस्तै की ट्राटस्की, बुखारी, आदि, कम्युनिष्ट पार्टीबाट अलग हुँदै गए । सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीको विश्व पार्टी कांग्रेस पछि ख्रुस्चेबले लिएको नीतिका कारणले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित भयो ।
– नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा भएका मुख्य रुपले ६ वटा फुटहरु उल्लेखनीय छन्ः १. डा. रायमाझीसँग भएको फुट, २. मोहनचन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा कोअर्डिनेसन ग्रुपसँग भएको फुट वा माले पक्षसित भएको फुट, ३. तुल्सीलाल पक्षसँग भएको फुट, ४. पुष्पलालको पक्षसँग भएको फुट, ५. निर्मल लामाको नेतृत्वमा ‘चौथो महाधिवेशन’ पक्षसँग भएको फुट र ६. मोहन वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी पक्षसँग भएको फुट ।
माथिका विभिन्न फुटहरुमाथि हामीले बेग्ला बेग्लै प्रकारले विचार गर्नु पर्दछ ।प्रथम, डा. रायमाझी पक्षसँगको फुटको प्रकृति शत्रुतापुर्ण नै थियो । उनले स्पष्ट रुपले राजाको पक्ष लिएका थिए । राजासँगको हाम्रो संघर्षको स्वरुप शत्रुतापूर्ण थियो । त्यसैले रायमाझी पक्षसित सम्बन्ध विच्छेद नगरेको भए हाम्रो पुरै पार्टी राजाको क्याम्पमा जान्थ्यो । तर उनले आफ्ना पक्षमा कैयौँ इमान्दार र सच्चा कम्युनिष्टहरुलाई पनि लगे । त्यसबाट पार्टीलाई धेरै क्षति पुग्यो । हामीले ठीक त्यहि रुपमा राखेर त तुल्सीलालको विरोध गर्दैनौ किनभने उहाँ एउटा इमान्दार र सच्चा कम्युनिष्ट हुनुहुन्थ्यो ।
छैठौँ, हाम्रो पार्टीको छैठौं महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय र ४ वर्षको गहन सैद्धान्तिक छलफलपछि हाम्रो पार्टीको एकता केन्द्रसँग पार्टी एकता भएको थियो । तर त्यो टिकाउ हुन सकेन । पछि हामीलाई यो कुरा प्रष्ट हुँदै गयो कि उनीहरुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो पार्टीलाई पनि माओवादीमा सामेल गर्नु नै थियो । लामाजीले इमान्दारिता पूर्वक नै पार्टी एकता गर्न खोज्नुभएको थियो । तर नारायणकाजीले माओवादीको गोप्य योजना अनुसार नै हामीसित पार्टी एकता गरेका थिए । त्यो कुरा प्रष्ट भएपछि उनीहरुसँगको हाम्रो एकता भंग भयो र हामीले नेकपा (मसाल) को पुनर्स्थापना गर्यौं ।
माथिका मुख्य फुटहरुबाहेक अन्य कैँयौँ पक्षहरुसँग पनि सामान्य प्रकारका फुटहरु हुने गरेका छन् । जसमध्ये बाबुराम, दिनानाथ शर्मा, मेघराज ज्ञवाली, डिलाराम, रामसिंह आदिसित भएका फुटहरु उल्लेखनीय छन् । ती सबै फुटहरुको एउटै कारण रहेको छः माओवादीको प्रभावमा परेर त्यो समूहमा सामेल हुनको लागि नै उनीहरु हाम्रो पार्टीबाट फुटेर गएका थिए । उनीहरुको फुटको तरिका पनि एउटै रहेको छः हाम्रो पार्टीबाट अलग भएपछि एउटा अस्थायी रुपले बेग्लै पार्टीको गठन गरेर हाम्रा बढी भन्दा बढी कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्ने प्रयत्न गर्ने र पछि माओवादीमा सामेल हुने ।
– माथि हामीले हाम्रो पार्टीमा भएका मुख्य फुट तथा तीनिहरुका प्रकृति वा कारणहरुको सरसरी प्रकारले चर्चा गर्यौँ तर पार्टीबाट फुट्नुका पछाडि सधैँ सैद्धान्तिक वा राजनीतिक कारणले मात्र काम गर्ने गरेका छैनन् । त्यसका पछाडि काम गरेका अन्य कतिपय कारणहरुमा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको पार्टी हो र त्यसले सबै कम्युनिष्टहरुले सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ । त्यसको अर्थ हुन्छ, शोषित वर्गका क्रान्तिकारी हित तथा पार्टी वा क्रान्तिका हितहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसको विपरित पुँजिवादी विश्व दृष्टिकोणले व्यक्तिगत स्वार्थ वा नाफालाई नै सर्वोपरी मान्दछ । तर कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वहारा दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने आवश्यकता भएपनि व्यक्तिगत जीवनमा पुँजीवादी विश्व दृष्टिकोणबाट थोरै बहुत वा अधिकतर रुपमा प्रभावित हुन्छ । को कति त्यसरी प्रभावित हुन्छ त्यो कुरा उसको चेतनाको कति विकास भएको छ ? त्यसमाथि निर्भर गर्दछ ।
– कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको शुद्धीकरण कार्यक्रमलाई बुर्जुवा र कम्युनिष्ट विरोधीहरुले सधैँ पार्टीभित्रका भिन्न मतलाई दबाउने तथा पार्टीमा तानाशाही कायम गर्ने तरिका बताउँदै आएका छन्, त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीको शुद्धीकरण कार्यक्रमलाई त्यसरी आलोचना गर्नु कुनै नयाँ र आश्चर्यको कुरा होइन । कम्युनिष्ट पार्टीमा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण, संगठनात्मक कारबाही वा सामान्य प्रकारका अनुशासनका कारबाहीद्वारा माक्र्सवादी–लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीलाई कायम राख्ने प्रयत्न गरिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा पार्टीभित्रका संगठनात्मक वा अनुशासन सम्बन्धी समस्याहरुले गम्भीर र व्यापक रुप लिन्छन् । त्यो अवस्थामा सामान्य भन्दा बढी केही व्यापक रुपले पार्टी भित्रका कमजोरीहरुलाई हटाउन ठोस कार्यक्रम अपनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही शुद्धीकरण कार्यक्रम हो ।
अन्य धेरैजसो प्रश्नहरु बढी संगठनात्मक प्रणाली वा अनुशासनसँग नै जोडिएका छन् । मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम, निर्मल लामा, बाबुराम भट्टराई, दिनानाथ, मेघराज ज्ञवाली, डिलाराम, गिरिधारी, गोविन्द सिंह थापा आदिका विरुद्ध हामीले गरेका कारबाहीहरु मुख्य रुपले त्यही श्रेणीमा आउँछन् ।
मनमोहनले महाधिवेशनको गोप्यता भंग गरेपछि उनका विरुद्ध कारबाही गर्नु सही थियो वा थिएन ? दिनानाथ समेतले हाम्रो पार्टी छोडेर गएपछि उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्नु सही थियो वा थिएन ? ऋषि देवकोटा ‘आजाद’ को प्रसंग चर्चा हुनु छुटेको छ । उहाँ पनि चौथो महाधिवेशनको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँले बेग्लै समानान्तर संगठन बनाएको हुनाले उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्नु परेको थियो । यी सबै कारबाहीहरु सही थिए वा थिएनन् ? त्यो कुराको निर्धारण यो कुराले गर्नेछः लेनिनवादी संगठन प्रणाली वा जनवादी केन्द्रीयताबारे कसले कुन प्रकारको दृष्टिकोण अपनाउँछ ? उक्त प्रश्नमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि व्यक्तीवादी, अराजकतावादी वा बुर्जुवाप्रकारको ‘स्वतन्त्र’ दृष्टिकोण अपनाउने प्रवृतीहरु बढ्दै गैरहेको छन् । उनीहरुले पार्टीको कुनै पनि प्रकारको अनुशासनलाई, लेनिनको पालादेखि नै, अधिनायकवादी प्रणाली बताउँदै आएका छन् । त्यस प्रकारको प्रवृतिका विरुद्ध संसार भरिका मार्क्सवादी–लेनिनवादीहरुले कडा संघर्ष गर्दै आउनु परेको छ र अहिले पनि हामीले त्यो संघर्ष गरिरहेका छौँ ।
← सहिद शोभाखर धनञ्जयको नासोलाई ‘युगदर्शन’ मार्फत अघि बढाएका छौंः मसाल
मसाल भन्छ : घुसपैठियाको सञ्जाल तोड्न पार्टी सदस्यहरु एकजुट बनौं →